Wed, Sep 30, 2020 | 01:46:15 NST
सेल्सका लागि सिप सिक्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रश्न: कतार महिलाका लागि सुरक्षित देश हो कि होइन् ? त्यहाँको ल्याण्डमार्क कम्पनीमा हामी श्रीमानश्रीमती जान खोजिरहेका छौं । मेडिकल र अन्तर्वार्तामा पनि छनौट भइसकेका छौं । तर अफर लेटर आएको छैन । सेल्सका लागि सिप सिक्नुपर्छ कि पर्दैन ? उत्तर: कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - राधिका जी, तपाईंले जुन पदको लागि अन्तरवार्ता दिनु भएको हो सोहि काम यहाँको सुपर मार्केटहरुमा कसरी गरिन्छ भनेर बुझ्न सक्नु हुन्छ। त्याहाँ गएर अबलोकन गर्नु होला। मिलेको खण्डमा कामै...
विदेशको चालक अनुमति पत्र नेपालमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ?
प्रश्न: वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैले आफू बसेको देशको चालक अनुमति पत्र (driving license) बनाएको हुन्छ। त्यो अनुमति पत्र नेपालमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ? वा त्यसलाई आधार मानेर नेपाली चालक अनुमति पत्र बनाउन पाइन्छ? पाइन्छ भने कुन देशको पाइन्छ र के कस्ता कागजात चाहिन्छ? उत्तर: कमल जी, हामीले तपाईंको जिज्ञासा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक/ प्रवक्तालाई राखेका थियौं। पहिलो कुरा तपाईंको चालक अनुमति पत्र सक्कली हुनु प...
सरकारवादी मुद्धा लागेको मान्छेले वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइन्छ ?
प्रश्नः मैले तीन वर्षअघि एमआरपी पासपोर्ट बनाएको थिएँ। तर अहिले साथमा छैन। मसँग पासपोर्ट नम्बर पनि छैन। अब मैले पासपोर्ट बनाउन के गर्नुपर्ला ? साथै सरकारवादी मुद्धा लागेको मान्छेले कोरिया जान पाउँछ कि पाउँदैन् ? उत्तरः अर्जुन जी, तपाईंको पासपोर्ट हराएको वा नष्ट भएको खण्डमा तपाईंले नयाँ पासपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईंले पासपोर्ट बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि सरकारवादी मुद्धा लागेकाले कोरिया जान नपाउने सम्भावना धेरै...
भिसा सक्कली हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने ?
प्रश्न : म्यानपावरले मेरो भिसा आयो भन्छ। तर श्रम स्वीकृति थाहा पाउन ३४००१ मा एसएमएस गर्दा श्रम स्वीकृति भएको देखिएन्। फेरी म्यानपावरले मलाई भिसा देखायो। त्यो भिसा सक्कली हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने ? उत्तर: राज कुमार जी, अन्तिम श्रम स्विकृती नभई भिसाको बिवरण वैदेशिक रोजगार विभागको एसएमएस प्रणालीमा राखिएको हुँदैन। त्यसैले एसएमएसमा जानकारी नआएको हुनसक्छ। तपाईंले म्यानपावरलाई पैसा बुझाउनु भएको छैन भने अन्तिम श्रम स्विकृती गरेपछि मात्रै दिनुहोला। यसो गर्दा तपाईं ठगीबाट बच्न सक्नुहुन...
मैले पासपोर्ट कसरी फिर्ता पाउन सक्छु ?
प्रश्न: मैले विदेश जानका लागि पासपोर्ट झापामा बुझाएको थिए। तर घरायसी समस्याले गर्दा विदेश नजाने भएँ। १५ दिन पछि म्यानपावरमा गएर पासपोर्ट माग्दा काठमाडौं लगिसक्यो भन्यो। अन्तर्वार्ता र मेडिकल भएको छैन। अब मैले पासपोर्ट कसरी पाउन सक्छु ? उत्तर: भूपिन जी, कानुन अनुसार तपाईंको पासपोर्ट कुनै संस्था वा व्यक्तिले तीन महिना भन्दा धेरै समय राख्न पाउँदैन वा ‘होल्ड’ गरेर राख्न पाउँदैन। म्यानपावर कम्पनीले तीन महिना भन्दा धेरै समय देखि तपाईंको पासपोर्ट राखेको हो भने त्यो गैरकानूनी काम हो। त्यसक...
ब्यतिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान के प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्छ ?
प्रश्न : दुबईको लागी मैले मेरो काकाको छोरासंग पासपोर्टको कपी पठाएको थिए। उसले पासपोर्टको कपी कम्पनीमा बुझाएर भिसा आउन थाल्यो भनेको छ। यसरी जादा कति खर्च हुन्छ ? उसले भिसा फ्री हो भनेको छ। मैले म्यानपावरमा सम्पर्क गर्नु पर्छ ? म्यानपावरले धेरै पैसा माग्छ रे के यो सहि हो ? उत्तर : सत्रुघ्न पुडासैनी, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार बिभाग - ब्यतिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि तपाईंलाई कम्पनीले पठाएको करार पत्र, भिसाको प्रतिलिपि चाहिन्छ। यी कागजात रोजगारदाता देशको च्या...
हातमा ६ वटा औंला भएकै कारणले मेडिकल फेल भइन्छ ?
प्रश्न: म कामका लागि विदेश जान चाहन्छु। मेरो समस्या भनेको मेरो दाहिने हातमा ६ वटा औंला छ। मैले मेडिकल पनि गरे। मेडिकल चेकअपगर्दा साउदी र मलेसियाको लागि लिदैन भन्यो, तर म दुवई जान चाहन्छु। मेडिकलमा पास छु। तर उता गएर औंलाको कारणले फर्किनु पर्छ कि पर्दैन ? उत्तर: कैलाश खड्का, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ – ६ वटा औंला तपाईंको जन्म देखिनै हुनुपर्छ। यो कुनै रोग होइन। तपाईंलाई काम गर्न अप्ठेरो छैन। शारिरिक परिश्रम गर्न कुनै अबरोध छैन। तपाईंको दैनिकि सामान्य हिसाबले चलिरहेको छ भने द...
वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाले कस्ता तालिम लिन पाउछन् ?
प्रश्न : म कक्षा ११ मा अध्ययनरत युवती हुँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने तालिम पुरुषका लागि मात्रै हो कि महिलाका लागि पनि छ। यदि महिलाले लिन पाउँछ भने कस्ता तालिम लिन पाइएला ? उत्तर : वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि पुरुषसँगै महिलाले पनि तालिम लिएर सिप सिक्न सक्छन्। औद्योगिक क्षेत्र, क्लिनर, होटल मजदुरका काममा धेरै महिला विदेश गइरहेका पनि छन्। अहिले जोर्डन भन्ने देशमा गार्मेन्ट कम्पनीमा पनि नि:शुल्क तालीम लिई जान पाइन्छ। नि:शुल्क तालिमको लागि तपाईंले सुबर्ण मल्टिपल ट्रेडिङ सेन्टरमा सम्...
मेडिकल फेल भएर फर्केको कति दिन भित्र उजुरी गर्नुपर्छ ?
प्रश्न : म मलेसिया पुगको एक हप्ता पछि मेडिकल गर्यो। मेडिकल रिपोर्टमा अनफिट देखियो। त्यसपछि मैले एजेन्टलाई फोन गरें। उसले पैसा फिर्ता दिन्छु, नेपाल फर्केर आऊ भन्यो। मलेसियामा मलाई १५ दिन काम गरेको पैसा पनि दिइएन। फर्केर एजेन्टकोमा पुग्दा मैले होइन्, मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले पैसा दिने हो भन्यो। मेडिकलमा जाँदा यहाँबाट होइन्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले दिने हो भनियो। यसो गर्दा गर्दै तीन चार महिना बितिसक्यो। मेडिकल गरेको कति समयपछि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ ? अनि पैसा फिर...
के दुई महिना नपुगी मेडिकल गर्न पाइन्छ ?
प्रश्न: मैले तिन महिना अगाडी वैदेशिक रोजगारीका लागि एउटा म्यानपावरमा एप्लाई गरेको थिए। धरौटी एकलाख मागेको छ भने मेडिकल २ पटक गर्नु पर्छ भनेको छ। दुई महिना पनि भएको छैन किन फेरी मेडिकल गर्नु पर्यो भन्दाखेरी केही बोल्न चाहदैन। तर मेडिकल २ पटक गर्नै पर्छ भन्छ। के दुई महिना नपुगी मेडिकल गर्न पाइन्छ ? उत्तर: कैलाश खड्का, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ – तपाईंले पहिलो पटक मेडिकल गर्दा फिट रिजल्ट आएको थियो र मेडिकल गरेको दुई महिना बितेको छैन भने दोहोर्याएर गर्नु पर्दैन। एकैपटक गर्दा ह...